ငှက်များ အညစ်အကြေး စွန့်မှု အများဆုံး ကားအရောင်ဘာလဲ | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar
Home » News » ငှက်များ အညစ်အကြေး စွန့်မှု အများဆုံး ကားအရောင်ဘာလဲ
admin | News | June 22, 2012
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ မြို့ ကြီး ၅မြို့တွင် မည်သည့် ကားအရောင်များသည် ငှက်များ၏ အညစ်အကြေး အများဆုံး စွန့်ပစ်ခံရသည် ဆိုခြင်းကို လေ့လာသည့် စစ်တမ်းတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Brighton, Glasgow, Leeds, Manchesterနှင့် Bristol မြို့များရှိ ကားပေါင်း ၁၁၄၀ အားလေ့လာ၍ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ (photo: flickr)
Share : Facebook Twitter	bird poop car paint
2,962 total views,4today Print
6 Responses to “ငှက်များ အညစ်အကြေး စွန့်မှု အများဆုံး ကားအရောင်ဘာလဲ”
Ethan Windwalker on June 22, 2012 @ 2:49 pm I spray with glass cleaner and wipe with tissue, as soon as I could.
Reply Ko Moe on June 23, 2012 @ 2:00 am ကားပေါ်မှာတစ်ရှုးဆောင်ထားပါ ငှက်ရဲ့အညစ်အကြေးအစိုအား တစ်ရှုးဖြင့်အလွယ်တကူဖယ်ခြားပြီးမှရေဖြင့်သန့်စင်သင့်ပါသည်။.
Reply Koyoe Kunt on July 17, 2012 @ 9:17 am ရေသန့်ဘူးနှင့် စွပ်ကျယ်စုတ် ဆောင်ထားပါတယ်။.
Reply Chonwe Win on July 21, 2012 @ 11:50 am ရှယ်ပြီနော်
Reply Soe Htike on July 23, 2012 @ 2:44 pm Right things
Reply Saw J J Lay on July 30, 2012 @ 9:26 am ဘာမှဆောင်ထားစရာမလိုသောနည်းလမ်း…မိမိလျှာဖြင့် asap လျက်ပါ! Reply Popular
Toyota Hilux Surf	1300 cc car Tyres	Facts to be careful before purchasingacar	price of 1300cc car	mitsubushi lancer evolution 8, 2000cc	ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများBrevis (88 views)2007 TOYOTA ISIS 2.0 PLATANA (7 seater) (84 views)TOYOTA CROWN ROYAL SALOON - G (69 views)HONDA CR-V 99 (69 views)TOYOTA VISTA (DIESEL AUTO) (64 views)toyota belta(2007) (61 views)Toyota Alphard (60 views)e36 ( 318 i ) (54 views)Mark x (51 views)Nissan AD Van (50 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar. All Rights Reserved.